FANAZAVANA DIAMOND ao amin'ny fivarotana kafe - mpankafy Kale
FANAZAVANA DIAMOND ao amin'ny fivarotana kafe
Ny iray amin'ireo mpanjifanay, dia mila fantson-drivotra miisa 10 hapetraka ao amin'ny fivarotany kafe, ary rehefa avy nanamafy ny fangatahany izahay dia manoro hevitra azy ireo mpankafy valindrihana diamondra izahay.
Tena faly tamin'ireo mpankafy KALE anay izy ary nandefa sary fanehoan-kevitra ho anay. Toa haingo kokoa noho ny mpankafy fotsiny izy io, misaotra Jonathan malala, manantena fa afaka hiara-miasa amim-pifaliana isika ato ho ato.
KALE Diamond valin-drihana mpankafy no modely malaza ho an'ny toerana ara-barotra, firenena samy hafa mpanjifa mividy izany ho an'ny trano fisotroana kafe, lobby, trano fisakafoanana, hotely, toeram-pivarotana lehibe sy ny toerana lehibe. Raha mila vahaolana ventilation ianao dia manantena izahay fa afaka misafidy modely iray ho an'ny toeranao ianao. Raha misy fanampim-panazavana, azafady avelao ny hafatra aminay, hamaly anao izahay tsy ho ela.